Meydad shalay laga helay isbitaalka Pumwani oo baaritaano lagu sameynayo – The Voice of Northeastern Kenya
Meydad shalay laga helay isbitaalka Pumwani oo baaritaano lagu sameynayo
Star FM September 18, 2018
Sarakiisha waaxda dembi baarista ee DCI-da ayaa bilaabay inay baaritaano ku sameyaan dhacdo shalay isbitaalka hooyooyinka ay ku umulaan ee magaaladatani Nairobi lagu arkay meydadka 12 carruur ah.
Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhanka kale guddoomiyaha caasimadda dalka ,Mike Sonko uu falkaasi kadib shaqada ka istaajiyay sarakiisha sar sare ee xaruntaasi caafimaad.
Mike Sonko, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ku sheegay inuu isbitaalka gaaray kadib markii cabasho ay uga timid dadweynaha taasi oo ah in maamulka xaruntaasi caafimaad uu demiyay mashiinadii yaalay qeybta dhalmada , tallabadaasi oo sababtay in caruurta meydadkooda la helay ay dhintaan.
Hasa ahaate waxaa uu barasaabka ka carooday in mid ka mid ah shaqaalaha isbitaalka uu isku dayay inuu khiyaano isagoo u sheegay in 24-kii saacadood ee la soo dhaafay hal canug keliya uu goobta ku dhintay .
Mike Sonko ayaa sheegay inuu halkaasi ku arkay meydadka 12 dhallaan ah oo la geliyay baco kadibna lagu keydiyay sanduuqyo.
Guddoomiyaha ayaa wacad ku maray inaan marnaba loo dulqaadan karin in dhibaatooyin aanan loo fiirsan ay la kulmaan haweenka isbitaalkaasi u tagaya si loogu adeego isagoo intaasi raaciyay in cid waliba oo dhacdadaasi mas’uuliyadeeda leh lala xisaabtamayo.
Hooyooyin halkaasi lagu daweeyay oo lacago laga qaaday ayuu u celiyay lacagtii ay bixiyeen isagoo sheegay inay khalad tahay in qofka bukaanka ah uu bixiyo qarash ay dowladu dusha saaratay.
Sarakiisha shaqada laga ceyriyay ayaa waxaa ka mid ah madaxa isbitaalkaasi Catherine Mutinda, sarakiil maamulka qaabilsan sida Zadock Angahya iyo George Nyadimo iyo Dr James Kamau oo ku takhasusay xanuunada dumarka.
Dhanka kale kalkaaliyayaasha ka howlgalo isbitaalka Pumwani ayaa Mr. Sonko u sheegay inaysan haysan qalab ku filan oo ay ku shaqeyaan iyo sariiraha bukaanka oo yar.
Sido kale cabashooyinka kalkaaliyayaasha waxaa ka mid ah inay tiradoodu yartahay sidaasi awgeedna ay ismaamulka Nairobi ka codsanayaan inuu shaqaleysiiyo ugu yaraan 50 howlwadeena caafimaad ah maadaama isbitaalkaasi ay hadda ka shaqeyaan 162 kalkaaliyayaal ah.
Mr .Sonko ayaa si ku meel gaar ah madaxa isbitaalka ugu magacaabay Mr .Simon Mueke .
← Dhgeyso warka habeenimo8;30pm
DHAGEYSO Biyo yaraan ka jirta Qeybo kamid ah xafadaha xerada qaxootiga ee Ifo →